Saika nanjary tarika vy i Microsoft noho ny logo | Famoronana an-tserasera
Iza no hilaza ny Microsoft arch-mahery izay amin'ny fiandohany, iray amin'ireo logo misy azyToa tarika rock kokoa noho ny orinasa natokana ho an'ny teknolojia vaovao; Indrindra ho an'ny iray izay nanova ny tontolon'ny PC mandraka androany.
Ary misy sary famantarana afaka mandalo satria avy any Megadeath ianao na tarika mozika mavesatra tamin'ny taona 80. Mahaliana ny fomba niovan'ny fiteny famolavolana sy ny fomba nanovan'ny orinasa iray ihany ny sary famantarana azy io mba hialana amin'ireo endrika miavaka sy lava be hitantsika ao amin'ny M, R ary F.
Niverina tamin'ny 1980 izany rehefa Microsoft nandroso tamin'ny famolavolana endrika logo hidina eo amin'ny tantara izany, satria toy ny tarika vy fotsiny izy io noho ny orinasa natokana ho an'ny fampandrosoana rindrambaiko.
Ny endrika sy ireo litera misavoana misy zoro mihidy dia liana te hahafantatra fa tsy toa an'i Microsoft izy io. Fa izany ve raha mankany amin'ny 1975 isikaToa saika hanao disko mozika amin'ilay funky izay nahomby tokoa isika tao anatin'izay folo taona izay.
Raha efa nanova ny sain'izy ireo ny zavatra rehefa mandeha amin'ny 1982 sy ny loharano isika jereo tsara kokoa io zanatsoratra io manakaiky izay mety ho orinasa teknolojia. Ary tamin'ny 1987 dia manakaiky an'io fahatsiarovana an-tsary io izahay ary nifandray akaiky tamin'ity orinasa natokana ho an'ny rafitry ny fiasan-dry zareo ity, na dia nanakaiky kokoa aza ireo sehatra hafa toy ny fialamboly.
Tsy maro ny olona mahalala an'io, fa i Microsoft dia tarika vy tamin'ny 1980-1982. pic.twitter.com/8sP3dv2lU8
- Ian Bogost (@ibogost) Novambra 19, 2019
Una ny evolisiona ao amin'ny logo dia tsy ny fahalianana ary izany dia tsy azo ampitahaina amin'ny hafa toa an'i Apple izay ny loko no niavaka. Hijanona eo io ho an'ny fandalinana sy ny hoavin'ity orinasa ity izay iray amin'ireo goavambe goavambe ankehitriny.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Inspiration » Raha ny an'ny Microsoft dia ny an'ny tarika vy
Fototra Domestika: fotoana tsy manam-paharoa sy azo antoka ny zoma mainty
Ny kanton'ny hevitra, boky hanatsarana ny fahaizanao mamorona.